"25/03/2020 Numero 14 per u - Page 54 of 98 - TheMummichogBlog - Malta In Italiano
HO HITANAO ATO 14
Raha mila fanazavana fanampiny sy ny
fitsidihana ny vaovao farany www.covid19.gov.mt
Ny mpampiasa Malta ‘Association nilaza fa ny fonosana ny fepetra ara-bola aseho ny governemanta
iray ny fanampiana ara-bola tsara sy ny vokatry ny fakan-kevitra iraisana. Ny Antenimieran’ny Varotra Mandritra izany fotoana izany
nanambara fa ny mahavoky ny fepetra mba hanampy ny orinasa tena voan’ny Covid-19, izany raha midera ny fanahy
ny dialgoue izay ny governemanta i amin’izany zavatra izany. Ny Malta Antenimieran’ny salantsalany izay nanizingizina fa ireo
fepetra hanome ny aintsika ho orinasa izay mila fanampiana, mba hahafahany miaro asa. Ny Gozo Business Antenimiera
ary ny Gozo Fizahantany Association nilaza fa ny ara-bola fandrisihana manome zava-dehibe ho an’ny toe-javatra manokana
miantraika Gozitan raharaham-barotra. Ny Malta Hotels and Restaurants Association nidera ny Praiminisitra fitokanana
ny mahita fa ny fizahan-tany ao amin’ny orinasa dia afaka handresy ny zava-tsarotra napetrak’i Covid-19. The General Workers
Mandritra izany fotoana izany Union nilaza fa ny fepetra hiantohana ny antoka karama farany ambany indrindra ho an’ireo miasa ao indrindra
Tsara setrin’ny NY
Package ara-bola FEPETRA
Ny banky ‘fanomezana
Ny Banky Valletta nanambara ny fanohanana ny fepetra ho an’ny mpanjifa izay voakasiky ny toe-draharaha ara-toekarena
nitondra momba ny Covid-19. BOV dia nandefa moratorium ny tsy latsaky ny 3 volana ao amin’ny renivola ary koa amin’ny
liana izay ampiharina ho an’ny an-trano na fampindramam-bola sy ny fampindramam-bola manokana. Ny fetra ho an’ny overdrafts sy ny karatra
tsy misy fanampiny vesatra efa nitombo. Fiampangana amin’ny fandaharam-potoana ny vaovao an-trano fampindramam-bola sy ny fampindramam-bola manokana dia
nesorina ihany koa, toy ny manana vesatra eo amin’ny fanitarana ny withdrawals bola sy ny fampiasana ny trano.
19 tranga vaovao ny Covid-19 no voamarina tamin’ny 24 ora farany. 8 amin’ireo tranga ireo mifandray amin’ny handeha any ivelany,
4 izay efa nanana fifandraisana amin’ny olona mitondra ny tsimokaretina ny tsimokaretina izay efa fantatra ny
manam-pahefana ara-pahasalamana, raha 7 no aretina amin’ny alalan’ny fampitana an-toerana, miaraka amin’ny loharanom-ny otrik’aretina tsy mbola
fantatra. Anisan’ny tranga vaovao ireo dia misy olona be taona iray ny 81 taona, izay hatreto Toa tsy
manana fahasarotana. Ny olona be taona hafa ny 61 taona dia mbola ao amin’ny Itu, fa tsy ao amin’ny fanjakana tsarotra.
Ny isan’ny olona izay hatramin’izao efa nizaha toetra tsara ny otrik’aretina 129 amin’izao fotoana izao.
Ny isan’ny swab fitiliana no haingana mba hamantarana ireo izay manana ny otrik’aretina sy hitokantokana
azy avy hatrany, mba hampihenana ny fanapariahana. Toy ny omaly, ny aretina amin’ny laboratoara Mater
Hospital Dei nanomboka naka swabs tamin’ny fotoana samy hafa slots efatra mandritra ny andro, fa tsy telo, tahaka ny isan-
fomba fanao teo aloha. Raha ny marina, tato anatin’ny 24 ora, 488 swabs nalaina. Malta sisa tavela teo anivon ‘ny firenena
izay maka ny swabs indrindra, ary hatramin’izao 3.819 efa voasambotra izy; ireo, 2.605 ireo olona nalaina avy
manolotra soritr’aretina sy 1.218 no nalaina avy amin’ireo olona izay niaiky ny hopitaly amin’ny fisefoana
fahasarotana. Ny isan’ny tsara toy izany toe-javatra avy amin’ny fitsapana dia miankina amin’ny tsirairay amintsika. Isika dia mila
miara-miasa, mba tsy mainka hitombo ny fihanaky ny Coronavirus.
SWABS SY FITSAPANA
AZA MIALA mihidy
Food sy nisotro orinasa nanohy nitandrina ny fitsipika napetraka teny aminy foana
nakatona mba ho amin’ny fihanaky ny Covid-19 ho nihena. Tao anatin’ny 24 ora, 800 fisafoana nentina
avy any Malta sy Gozo hafa 150 tao. Tsy nisy tratra ny fandikana ireo fitsipika. Ny antso sisa tavela
fa ny fiaraha-miasa, na avy amin’ny mpanjifa sy ny vahoaka ho tsy congegrate manoloana ny maka-izy
orinasa, fa hitandrina ny lavitra. Afaka mitatitra fanitsakitsahana amin’ny 21692447.
Fisafoana ON izay eo ambanin’ny
Ny polisy, miaraka amin’ny tompon’andraikitry ny fahasalamana sy ny manam-pahefana avy ao amin’ny Sampan-draharahan’ny fiarovana sivily,
329 fisafoana natao tany Malta sy Gozo. Nandritra ireo fisafoana, olona iray izay tratra
nandika ny lalàna no nampandoavina lamandy. Araka ny mandrakizay, ny fitsarana ambony fa ny olona rehetra sisa tavela dia tokony ho tompon ‘andraikitra sy
hiara-miasa amin’ny toromarika izay efa navoakan’ny manam-pahefana.
25981000 – Ho an’ireo izay manana fanontaniana mikasika ny sehatry fanabeazana sy ny
21692447- Fa hoteliers sy ny mpizaha tany, izay manana fanontaniana mikasika ny
25903030 – Fa zokiolona olona namoy ny fanohanana izay mila fanafody, vonona-nanao
sakafo na ny sakafo (voankazo sy legioma).
25469111 – Ho an’ireo izay miasa ao amin’ny orinasa lalao.
21411 411 – Ho an’ireo in maintsy ny fanokanan-toerana, izay mitaky fepetra
ny sakafo sy ny fanafody
144 – Ho an’ireo izay mila fanazavana momba ny ara-bola fepetra
angoninay Malta Enterprise.
153 – Ho an’ireo izay mila fanazavana momba ny ara-bola fepetra
angoninay amin’ny departemantan’i ho an’ny Fiahiana ara-tsosialy.
2204 2200 – Malta mponina Fa izay tratra any amin’ny iray amin’ireo avo-doza
firenena ary maniry ny hiverina ho any Malta
111 – Ho an’ireo izay mahatsapa soritr’aretin’ny COVID-19 na izay maniry hahazo fanazavana fanampiny